Nay La Mobile Application: Collection of Astrology, Mingalar 100 Years Myanmar Calendar, Diary, Event and News
Nay La Mobile Application
သင့်တစ်နေတာ ကံကောင်းစေဖို့ နေလ မှနေ တာဝန်ယူပါရစေ။ "နေလ" တွင် ဗေဒင်ပေါင်းချူပ်ကဏ္ဍ၊ မင်္ဂလာမြန်မာ နှစ်(၁၀၀) ပြက္ခဒိန် နှင့် ဒိုင်ယာရီ စသည်တို့ ....
နေလ အက်ပလီကေးရှင်း၏ ကဏ္ဍစုံ
မင်္ဂလာ နှစ်တစ်ရာ မြန်မာ ပြက္ခဒိန်
ရွှေမြန်မာများ အတွက် အလွန်အသုံးဝင်သော နှစ် ၁၀၀ ပြက္ခဒိန်
(ရ) ရက်သားသမီး နေ့စဉ်ဟာစာတမ်း
(၇) ရက်သားသမီးများ ကံကောင်းစေရန် ဆရာမ ဒေါ်ကြာညိုသင်း၏ နေ့စဉ် ဟောစာတမ်း
မဟာဘုတ် အပါတ်စဉ် ဟောစာတမ်း
ကံကောင်းစေရန် ဆရာငြိမ်းအေးလူ၏ အပါတ်စဉ် ဟောစာတမ်း
ရာသီခွင် အပါတ်စဉ် ဟောစာတမ်း
ဆရာစိုးနိုင်၏ ၁၂ ရာသီခွင် အပါတ်စဉ် ဟောစာတမ်း
တားရော့ မေးပြီး ကံကောင်းခြင်း ဖေါ်ဆောင်လိုက်ကြရအောင်
နေစဉ် ကံကောင်းခြင်းများ ဖေါ်ဆောင်လို့အောင် ဖုန်းရွှင် ဖတ်လိုက်ကြရအောင်
သင့် မွေးနေ့ကို တွက်ချက်ပြီး ဂဏန်းဗေဒင် မေးလိုက်ကြရအောင်
ဒိုင်ယာရီလေးရေးပြီး အမှတ်တရများကို သိမ်းထားလိုက်ပါ
မေမေ မွေးနေ့၊ သားသား မွေးနေ့၊ ချစ်သူ နှစ်ပါတ်လည်နေ့ စသည်တို့ကို သိမ်းဆည်းထားပါ
ဗေဒင် ဆရာ ဆရာမ များကို စုစည်းပေးထားပါတယ်
သုတ၊ ရသ၊ ဂမ္ဘီရ သတင်းစုံ
သတင်းစုံ ကိုလည်း ဖတ်ရူလို့ရပါတယ်
မြိူ့ကြီးများ၏ ပွဲသတင်း အချက်အလက် စုံစုံလင်လင်
Download NayLa App
သင့်တစ်နေတာ ကံကောင်းစေဖို့ နေလ မှနေ တာဝန်ယူပါရစေ။ "နေလ" ဆိုသည်မှာ နေ့စဉ်သုံး မိုဘိုင် အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး နေလ၏ အက်ပလီကေးရှင်းထဲတွင် ဗေဒင်ပေါင်းချူပ်ကဏ္ဍ တွင် (၇)ရက်သားသမီး နေ့စဉ်ဟောစာတမ်း၊ မဟာဘုတ် ဟောစာတမ်း၊ ရာသီခွင်ဟောစာတမ်း နှင့် တားရော့တို့ ပါဝင်ကာ သင့်ကံကောင်းစေဖို့ နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် မင်္ဂလာမြန်မာပြက္ခဒိန် ကဏ္ဍတွင် နှစ်(၁၀၀) မြန်မာပြက္ခဒိန် နှင့်အတူ ဒီကနေ့က ရက်ရာဇာလား၊ လူနက္ခတ်လား၊ ပုတိဖွားလား နှင့် ဒီကနေ့၏ အချိန်ကောင်းလေးများကို ဖေါ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါသည်။ ထိုအတူ နေလ တွင် သင့်မှတ်တမ်းများ ရေးဖို့ ဒိုင်ယာရီ၊ ချစ်ခင်ရသူများ၏ မွေးနေ့ နှစ်ပတ်လည်နေ့များကို မှတ်ထားဖို့ အမှတ်တရနေ့စွဲများ ပါဝင်ပါသည်။ အခမဲ့ ၇ ရက်အသုံးပြုနိုင်ဖို့ အခုပဲ အခမဲ့ ဒေါင်းလုတ်ရယူလိုက်ကာ သင့်ကံကောင်းခြင်းများကို ဖေါ်ဆောင်လိုက်ပါ။
Launch NayLa App
ခုပဲ Google Play Store မှနေ ဒေါင်းလုတ် ရယူပြီး အသုံးပြုလိုက်ပါ။
နေလ မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း ဆိုတာ ဘာလဲ ?
နေလ မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းမှ သင်ကံကောင်းစေဖို့ မေတ္တာ၊ စေတနာများစွာဖြင့် တစ်နေရာတည်းမှာ သုတ ရသ ဂမ္ဘီရ သတင်းအစုံအလင်ကို မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် ဖတ်ရှုနိုင်မည့် Mobile Application တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
နေလ မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း ကို အသုံးပြုဖို့ ဘာတွေလိုအပ်လဲ ?
ပထမဦးစွာ နေလ မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း ကို Download link များမှာ Download ရယူ ထားရပါမည်။ Download ပြုလုပ်ပြီးပါက မိမိအသုံးပြုနေသာ မိုဘိုင်းဖုန်းထဲသို့ Install ပြုလုပ် ထည့်သွင်း ရပါမည်။ Install ထည့်သွင်းခြင်းအဆင့် ပြီးပါက MPT ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် ၀န်ဆောင်မှုကို ရယူပြီ နေ့စဉ် အကန့်အသတ်မရှိ ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။
နေလ မှ နေ့စဉ် ဘာတွေဖတ်ရှုနိုင်မှာလဲ ?
နေလမှ ဂမ္ဘီရ သတင်းအစုံအလင်ကို မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် ဖတ်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး နေလ မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းမှ သုံးစွဲသူများအတွက် မင်္ဂလာမြန်မာနှစ် ၁၀၀ ပြက္ခဒိန်၊ ဗေဒင်ပေါင်းချုပ်၊ မဟာဘုတ်၊ ဖုန်းရွှေ၊ အမှတ်တရနေ့စွဲများ၊ ပွဲအခမ်းအနားအစီအစဉ်များ အစရှိသဖြင့် တစ်နေရာတည်းမှာ စုံစုံလင်လင် ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့ အကောင်းဆုံး ၀န်ဆောင်မှုများနဲ့ ကံကောင်းစေတဲ့ လက်ဆောင်မွန် မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
နေလ အမေးအဖြေ ကဏ္ဍ ဒေါင်းလုတ်
နေလ အမေးအဖြေ ကဏ္ဍ ဒေါင်းလုတ် PDF ရယူလိုက်ပါ
သင့်တစ်နေတာ ကံကောင်းစေဖို့ နေလ မှနေ တာဝန်ယူပါရစေ။ "နေလ" တွင် ဗေဒင်ပေါင်းချူပ်ကဏ္ဍ၊ မင်္ဂလာမြန်မာ နှစ်(၁၀၀) ပြက္ခဒိန် နှင့် ဒိုင်ယာရီ စသည်တို့ အသုံးပြုဖို့ ခုပဲ ဒေါင်းလုတ် ပြုလုပ်လိုက်ပါ
တိုက်ရိုက် ဒေါင်းလုတ် Google play
Bld C, Rm 201, Thazinmin Housing, Thingangyun, Yangon, Myanmar.
09 8998 4000 7
COPYRIGHT © 2018. ALL RIGHTS RESERVED. NAYLA MOBILE APP BY HTUT Media